Imaaraatka iyo Masar Oo Lagu Eedeynayo In Ay Caqabad Ku Noqdeen Heshiiska Liibiya -
HomeWararkaImaaraatka iyo Masar Oo Lagu Eedeynayo In Ay Caqabad Ku Noqdeen Heshiiska Liibiya
Imaaraatka iyo Masar Oo Lagu Eedeynayo In Ay Caqabad Ku Noqdeen Heshiiska Liibiya
January 15, 2020 F.G Wararka 0
Dawladaha Imaaraatka iyo Masar ayaa la aaminsanyahay in ay kaalin weyn ka ciyaareen ka bixitaankii jeneral Xaftar heshiiskii xabbad-joojinta ee magaalada Moskow ee dalka Ruushka, kaasi oo la rabay in dalka Liibiya nabbad loogu soo dabaalo.
Hoggamiyaha jabhada hubeysan ee ka dagaallanta dalka Liibiya jeneral Khalifa Xaftar ayaa markii hore ogolaaday xabbad-joojinta balse ugu dambeyntii isagoo aan saxiixin heshiiska isaga soo tagay kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen dalalka Ruushka iyo Turkiga.
Dhinaca kale Erdogan, madaxweynaha dalka Turkiga ayaa ku goodiyay in ay cashar u dhigi doonto jabhada jeneral Xaftar haddii ay xabbad ka bilaabaan gudaha dalka Liibiya, iyadoo la ogyahay in ciidamada Turkiga ay ku suganyihiin gudaha dalkaas, si ay u difaacaan dalwada Liibiya.
Sida laga soo xigtay macluumaadka uu helay wargeyka Daily Sabah oo laga helay ilo diblomaasiyadeed, Imaaraatka iyo saraakiisha sirdoonka dalka Masar waxa ay cadaadis ku saaray jeneral Xaftar inuu baabi’iyo heshiiska xabbad-joojinta loo qorsheeyay inuu nabad waarta ka keeno Liibiya.
Ilo wareedyo la helay ayaa sheegaya in tallaabada uu heshiiska kaga baxay jeneral Xaftar ay la yaab ku noqotay Turkiga, iyo xitaa sidoo kale Ruushka, iyagoo intaas ku daray in Immaraatka iyo saraakiisha sirdoonka Masar ay caqabad ku noqdeen fursadaha heshiis lagu gaari lahaa, si xabbad-joojin oga dhaqangasho dalka Liibiya.
Labadan dal waa Imaaraatka iyo Masare ayaa lagu eedeynayaa in ay kaalin weyn ka qaateen dabka ka shidan dalka Liibiya iyagoo taageero siiya jabhada sharci darrada ah ee uu hoggamiyo Xaftar, waxa ayna ujeedadoodu tahay in ay awooda kala wareegaan dawlada caalamku aqoonsanyahay ee ka jirta dalka Liibiya.